About isu - Sand pombi, Sump Pump, Gravel Pump Manufacturer
JP Metal & Equipment Co., Ltd nheyo muna 2006, ndiyo huru nyanzvi yepamusorosoro maindasitiri pombi mugadziri vaite kutsvakurudzwa uye kwekurasira slurry pombi, kupfeka uye ngura nemishonga zvokuvakisa uye OEM kugadzira. JP pombi boka rinotaura zvinopfuura 40000 mativi metres, vakanyorwa guta iri Currencykuva miriyoni 18. Mumakore nesimba simba uye vanhu vaifarira pfungwa, tinotora vazhinji yepamusoro zvakanaka uye michina matarenda. Huripo netsvimbo iri vanhu vanopfuura 220, iye 30% vane mukoti. Kunze, JP pombi rave zita sezvo amachinda akura akakurumbira muchiso uye kwesayenzi uye kwokugadzirwa kwezvinhu utsanzi vachida. Chinozoiswa ISO9001: 2008 yepamusoro utariri hurongwa, JP pombi akanga paakavapa musoro Hebei simba okuponesa uye zvakatipoteredza kuchengetedzwa vachida. Pamwe akaramba pakuwedzera pakafunuka, kambani yedu yava kupfuura slurry pombi romugove mujinga zvakafanana bhizimisi iri Shijiazhuang.
JP pombi ane makore akawanda anobatsira ruzivo kukura uye kushandisa slurry pombi. Kwakavakirwa kudzidzisa uye kuchipedza wokumwe michina yemhando yepamusoro, chigadzirwa dzinotevedzana hwakakwana kuita uye nhau yave akaumba. Panguva ino, huru zvibereko zvinosanganisira yakatevedzana slurry pombi, FGD injiniya chaiyo pombi, mavhu pombi, dredging pombi, froth pombi, zvemakemikari pombi uye achangobva yakatanga PU rabha. Mazana yokutevedzera, zvinowanzoshandiswa migodhi, simbi, marasha kugeza, Magetsi, flue gasi desulfurization, dredging, mvura engineering, peturu uye makemikari maindasitiri, matunhu neminisiparati kutarisira kudzivirirwa kwezvakatipoteredza, tsvina kurapwa nezvimwe maindasitiri.
Our kugadzirwa nharaunda ndokwenguva nzvimbo 24000 mativi metres, zvachose kugadzirwa vanokwanisa ane goho pagore riri 10000 inokwana zviyero (nemhando), uye gore negore goho yamarudzi ose marefu chromium chiwanikwa castings iri 2000 tons.The kugadzirwa nharaunda rakakamurwa mumatunhu mashanu imwe nzvimbo uye vaviri nzvimbo, kureva chakuvhuvhu Kudzingwa, kupisa kurapwa, nemicheka machine, kuumba nomoto uye gungano unhani mashanu kugadzirwa nzvimbo; apedza kupembedza zvikamu; yepamusoro kuongorora uye mvura chiedzwa. The zvinhu chikuru zvigadzirwa: A05, A49, A33, A51 nemamwe matunhu chromium chena kukandira simbi.
Kukura chigadzirwa magadzirirwo uye kugadzirira kwacho adopts CFD uye CAPP rwokugadzira. The bvunzo Kururama kumwedzi mukuru kumanikidzwa bvunzo chiteshi zviri ISO9906 pamwero zvakarurama, kutsigira dzakasiyana-siyana soro-zvakarurama nekuongororwa zvokushandisa, Analytical zviridzwa uye saka on.All Kudzingwa vave phenolic uye kuumbwa. Zvichakadaro kuti kuvandudza slurry pombi ezvinhu, JP pombi otaura itsva mabikirwo vakarasika furo Kudzingwa. Tichishandisa nzira iyi, pose roughness kuti Kudzingwa inogona kusvika Ra3.2 kuti 12.5μm; kutsinga saizi anogona kusvika CT7 9; ari machine ngaabvumire vaifanira iri 1.5 kuti 2mm. Kudzingwa haana isipi, Burr uye gwaro, iyo inosimbisa zvinhu uye chitarisiko slurry pombi zvikamu. Zvaaishandisa nematani 1, 2 matani, matani 5 zvenguva kakawanda chamatare, tinogona kugadzira matani 8-10 achibudisa kamwe nguva. Heat kurapwa workshop anoshongedza maviri 20 cubic nemishonga-mhando kupisa kurapwa hwechoto. Vazhinji muchina Ezvemutauro vari CNC ari machine workshop, uye varipo 4.2M uye 4.5M wehunyambiri lathe uye vanopfuura 20 muzvikamu muchina Ezvemutauro. Uyezve, pane zvakasiyana-siyana hoisting zvokushandisa, simbi nokuveza uye nomoto midziyo, impeller pamwero Tuning zvokushandisa, Kuumbwa midziyo, sandblasting makorari midziyo inonzi kugadzirwa vanokwanisa.
JP pombi zvakazara zvokurimisa ari ISO9001 utariri hurongwa ochengeta muitiro rekushanyirwa. Quality rokuongorora zvinyorwa zvinowanikwa mukurima zvose zvirimo. Professional zviridzwa zvinosanganisira spectrometer, metallographic analyzer, pakakanganisika detector, zvokuimba bvunzo muchina (kugozha, kwechirwere, zvakaoma), rinobva flowmeter, kumanikidzwa geji, ammeter, vibration meter, ruzha meter, hydraulic experimental munyonga kuti usashandisa nenyanzvi. Perfect kuonekwa runovimbisa unhu midziyo kuitira kuti mumwe nomumwe pombi uye zvikamu zviri nechokwadi zvinodiwa.
JP pombi yapararira mumhuri musika vose China pamusoro 30 mapurovhinzi uye Municipality. Uyewo rave zvinobudirira kushandiswa munyika 20 pose .First mutsetse mudonzvo vane basa ruzivo kugovera basa vatengi. Pre-sale basa: pamwe chaiko nokushanda ezvinhu, tinogona kupa Consulting mabasa uye inogutsa kugadzira chirongwa. In kutengeswa mabasa: mutengi vaifarira, isu zvinopa Kuongorora, cherechedzo uye nadzurudzo zvakagadzirwa kuronga. Pashure-sale basa: isu zvinopa mabasa nzwisisika kusanganisira chokugadza nokutumwa zvokushandisa, vashandi kudzidzisa, handingadariki nhengo wedzerai uye mamwe mabasa.
Enterprise budiriro pfungwa :
For emakambani: vanhu vaifarira
Nokuti zvinhu: sezvo hwakasimba sezvo pamatombo
Nokuti musika: nyatsoshanda utsanzi
Nokuti kasitoma: dzose
JP pombi yave vachinamatira kuvimbika, utsanzi, kushanda zvakanaka, pamwe mweya uye "kuumba chaiko vatengi" bhizimisi uzivi. shamwari nomufaro kushanyira fekitari uye kutarisira kushanda nemi kuti pave neramangwana riri nani.